Splender yakaongorora pamusoro pemamirioni mana kutengesa munzvimbo mazana masere nemazana masere + kuona nzvimbo dzekutenga pamhepo muna800 zvichienzaniswa na2015. Zuva rekutenda raive zuva rechitatu repamusoro rekutenga pamhepo mwaka nemacomputer nemagetsi zvichitungamira pazvipo asi zvipfeko uye zvishongedzo zvinotungamira munzira kukura. Cyber ​​Muvhuro ichiri chikuru zuva rekutenga pazororo online, iine 2014% yekutengesa kwezororo. Zvisinei, kutengesa kwaive pasi 6% kubvira 14. Mune maonero angu, ipapo
Kugovera kwedu Kubudirira kwa2015 uye Kukundikana!
Mugovera, January 2, 2016 Svondo, Ndira 3, 2016 Douglas Karr
Wow, rakadii gore! Vanhu vazhinji vanogona kutarisa matanho edu uye vopindura ne meh ... asi hatina kukwanisa kufara nekufambira mberi kwakaitwa nenzvimbo mugore rapfuura. Kugadziriswazve, iko kuwedzera kwekutarisa kune mhando pazvinyorwa, iyo nguva yakashandiswa pakutsvagisa, zvese zviri kubhadhara zvakanyanya. Takazviita zvese tisinga wedzere bhajeti yedu uye tisingatenge chero traffic ... izvi zvese kukura kwehupenyu! Kusiya zvikamu kubva kunotora spam zvinyorwa, heino